मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा हुन्छन् यस्ता ९ फाइदा ! - Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ मंसिर १७ १५:०७ 3
एजेन्सी । माया गर्नु वा मायाजालमा पर्नु आफैँमा अनौठो अनुभूति हो, जसको अनुभव माया गर्नेलाई वा मायाको जालमा पर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । माया वा ‘लभ’ले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्र दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ । मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन् । मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा निम्न नौवटा फाइदा यस्ता छन्ः
मायामा पर्दा एउटा अनौठो अनुभव हुन सक्छ । आफूलाई संसारकै उच्च स्थानमा रहेको अनुभूति हुनुको अतिरिक्त मायाले तपाईंको छालामा चमक थपिदिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार मायामा पर्दा शरीरले इन्ड्रोफिन्सलगायतका हर्मोन निष्कासन गर्छ । यसले पीडाबोधक हर्मोन कोर्टिसोल निष्कासनको मात्रा घटाउन सहयोग गर्छ ।
माया गर्ने व्यक्तिको साथ र हात पाएपछि डिप्रेसनलाई सजिलै हराउन सकिन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार मायाले इन्ड्रोफिन्सलगायतका खुसी बनाउने हर्मोन निष्कासन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । शरीरमा यस हर्मोनको वृद्धिले डिप्रेसनलाई जित्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
अमेरिकाको हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिस डिपार्टमेन्टको एक प्रतिवेदनअनुसार मायामा परेका जोडी अन्यको तुलनामा अझै बढी स्वस्थ र उनीहरुमा अन्य रोग वा कमजोरीको मात्रा तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । यसको निश्चित कारण पत्तो नलगाए पनि एक अर्काको मायामा परेको जोडी अझै स्वस्थ भएर दीर्घजीवी हुने विषयमा चासो देखाउने, उचित व्यायाम गर्ने र नियमित परीक्षण गर्छन् ।
एनल्स अफ बियभियरल मेडिसिनमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार खुसी विवाह वा सम्बन्ध भएको जोडीको रक्तचाप अन्य (अविवाहित वा एकल)को तुलनामा न्यून थियो । तपाईंको सम्बन्धले रक्तचापलाई निर्देशित गर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार असन्तुलित वा नराम्रो सम्बन्ध हुने मानिसको रक्तचाप उच्च हुने गर्छ ।
मायाजालमा उनिनु निकै रमाइलो अनुभूति हो । राम्रो सम्बन्ध हुने जोडीमा निरन्तर खुसी बनाउने हर्मोन निष्कासन हुन्छ र तनावलगायतलाई हराउँछ । यसबाहेक तपार्इं खुसी हुँदा दुःखी बनाउने हर्मोन कोर्टिसलको मात्रा घट्छ र बिन्दास भएर बाँच्न सकिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : काखमा माकुरो आएपछि तर्सीएकी महिलाले गाडी खसाईन्
हो, मायाले उपचार छिटो हुने वैज्ञानिक रुपमै प्रमाणित भइसकेको छ । अर्काइभ अफ जनरल साइक्याट्रियामा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार राम्रो र स्थिर सम्बन्ध हुने जोडीको घाउ अन्यको तुलनामा निकै छिटो निको भएको थियो । नराम्रो वा खराब सम्बन्ध हुने व्यक्तिमा न्यून उपचारको क्षमता भएको पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । निकै निराश, दुःखी, एक्लो वा हीनताबोध गर्ने व्यक्तिमा कोषहरु खुम्चिने भएकाले पनि उनीहरुको उपचार ढिलो हुन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार खुसी र स्थिर सम्बन्ध भएका मानिसहरु धेरै वर्ष बाँच्छन् । मायाले एक अर्कोलाई सुरक्षा र आफ्ना दुःखसुःख आदानप्रदान गर्ने अवसर दिन्छ । जोडीमध्ये एउटालाई समस्या पर्दा अर्काेलाई आफ्ना समस्या सेयर गर्ने र छलफलबाट समाधानको उपाय समेत खोज्ने हुँदा प्रायः समस्या समाधान गरी विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउनुका साथै दीर्घजीवी हुने अवसर प्रदान गर्छ ।
सँगसँगै मिलेर काम गर्ने र सल्लाह गर्ने जोडीले सजिलै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ । यसबाहेक मायामा जमेको जोडीले एक अर्कालाई स्वस्थ रहन उत्प्रेरणा दिनुका साथै सुन्दर र फुर्तिलो हुन हौसला प्रदान गर्छ ।
माया र नियमित यौन सम्पर्कले तपाईंको मासिक धर्मलाई नियमित बनाउन सहयोग गर्छ । प्लान्ड प्यारेन्टहुडमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार सातामा कम्तीमा एकपटक यौन सम्पर्क गर्ने महिलामा मासिक धर्म नियमित पाइएको थियो ।
गर्भवती महिलाले प्लास्टिकको बोतलबाट पानी पिउनु खतरनाक
भ्वाइस अफ नेपालको फिनाले कतारमा हुँदै
महिलाले एकसाथ ६ बच्चा जन्माएपछि राष्ट्रपतिले दिए बधाई
काखमा माकुरो आएपछि तर्सीएकी महिलाले गाडी खसाईन्
विवाहित महिलामाथि पनि किन आँखा लगाउछन् पुरुष
अन्तरिक्षमा महको बट्टा खोल्दा देखियो अनौँठो दृष्य (भिडियो)
हातमा यो रेखा टुटेको छ भने जिन्दगीभर हुन्छ तनावै तनाव, तपाईको हत्केला कस्तो छ ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको निधन
यी ८ राशिका लागि निकै शुभ छ यो साता, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल …
भित्री बस्त्रको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनैपर्छ यी कुरा ! यो बस्त्र लगाउने कि नलगाउने
सामूहिक हत्याकाण्डः रातभरी के भएको थियो ? पहिलो पल्ट शव देख्ने छिमेकीको खुलासा (भिडियो)
आँखा कमजोर भयो ? यी २ उपाय अप्नाउनुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ रिजल्ट
यी जुस, जसले सजिलैसँग घटाउँछ शरीरको मोटोपन
नियमित मात्र एक गिलास गाँजरको जुस पिउँदा मिल्छ यतिधेरै फाइदा
तामाको भाडामा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी चीज, हुनसक्छ विषमा परिणत
बाल यौन दुराचारीको गिरोह समातियो, ५० बालबालिकाको उद्धार